SAWIRRO: Nin la sheegay inuu ka soo goostay Alshabaab oo la abaal mariyey – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaSAWIRRO: Nin la sheegay inuu ka soo goostay Alshabaab oo la abaal mariyey
SAWIRRO: Nin la sheegay inuu ka soo goostay Alshabaab oo la abaal mariyey
Hay’adda Nabad-sugida dowlad goboleedka Jubbaland ayaa Magaalada Kismaayo ee Xarunta gobolka Jubbada hoose ku soo bandhigay nin ay sheegeen inuu ka tirsanaa Al-Shabaab oo isku soo dhiibay.
Ninkaas ayaa waxaa lagu magacaabaa Aadan Uudow Cabdi, waxaana uu watay qori Ak-47 ah iyo booshkiisa, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada Nabad-sugida Jubbaland.
Taliyaha Ciidanka Nabad-sugida Jubbaland Axmed Muuse Xersi ayaa sheegay in Aadan Uudow ay ku abaal-mariyeen lacag maadaama qorigii uu watay uu la soo fakaday, faahfaahina kama bixin qaabka ay ninkan ugu suuragashay inuu ka soo goosto Al-Shabaab.
Weli arrintan kama hadlin Al-Shabaab loogamana baran iney ka hadlaan arrimaha noocan ah, balse Jubbland ay marar badan horay u soo bandhigtay Saraakiil iyo ciidamo ay sheegeen inay ka soo goosteen Al-Shabaab.
Xeradii ciidamada Hiilweyne oo dib loo howlgelinayo iyo Wasiiro & taliyeyaal kormeeray (Daawo Sawirro)
Imaaraatka Carabta oo ku faanay Dekeddaha Jabuuti iyo Berbera, Sheegayna in…